Kumiswe isikhulu somnyango ngecala locansi
Khethukuthula Sangweni | June 7, 2021
SIMISIWE emsebenzini isikhulu soMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, esibhekene necala lokuzitika ngocansi nomsebenzi osezingeni elingaphansi kwaso, ngokomsebenzi.
Umthombo owazi udaba ukusuka nokuhlala, uthi isikhulu esingumuntu wesilisa simiswe emuva kokuthi owesifazane osemncane efake udaba ezikhulwini zomnyango, ekhala ngokuthi isikhulu besilala naye silokhu senza izethembiso ezithize ezithinta umsebenzi.
Ngesikhathi sokuloba kuthiwa isikhulu bese sivele sotha ilanga ekhaya emuva kokumiswa emsebenzini.
“Unikwe incwadi yokumiswa ngoMsombuluko. Sengithi owesifazane uvele watshela esinye sezikhulu, sona sabikela inhloko yomnyango, yalusukumela udaba. Kuthiwa owesifazane unengane, okusolwa ukuthi ngeyakhe umlisa omisiwe emsebenzini futhi uke wayishaya intokazi komunye umcimbi wokuvalelisa omunye umsebenzi,’’ kusho umthombo olwazi kahle udaba.
Kuthiwa ngenxa yobucayi bodaba, kuphoqeleke ukuthi isikhulu simiswe kuze kube uphenyo luyaphothulwa. Kuthiwa isikhulu sisolwa ngokuthi sayenga owesifazane saze samgojela, salala naye okuyinto okuthiwa kayemukelekile emnyangweni. Umnyango uyaziwa ngokuhlala ushumayela ukuthi makuliwe nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane esifundazweni.
Okhulumela umnyango, uMnuz Mhlaba Memela, uthe sikhona isikhulu esimisiwe kodwa wangafuna ukudalula eminye imininingwane.
“Singakuqinisekisa ukuthi kunomsebenzi wethu omisiwe ngezinsolo ezithile abhekene nazo. Umiselwe ukuthi umnyango ukwazi ukwenza uphenyo lwangaphakathi kahle. Kuyizinsolo ezikhathazayo ngoba ungqongqoshe uhlala egqugquzela ukuthi abasebenzi bomnyango babe yisibonelo ngendlela yokuziphatha. Akufanele sikhohlwe wukuthi izinsolo ziyizinsolo, kuze kube kuyavela kahle ukuthi kwenzekeni,’’ kusho uMhlaba.
Kuvela lolu daba nje, bekusanda kubikwa ukuthi omunye umsebenzi walo mnyango ehhovisi eliseMandeni, usenkingeni ngecala lokushaya omunye umsebenzi ongusonhlalakahle.